Hecom သည် Sequoia China နှင့် Weilai Qi မှဒေါ်လာ ၃၅ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည် - Pandaily
Hecom သည် Sequoia China နှင့် Weilai Qi မှဒေါ်လာ ၃၅ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်
Feb 11, 2022, 17:09ညနေ 2022/02/11 23:14:33 Pandaily
Haikom (Beijing) Technology Co., Ltd မှ မကြာသေးမီက ကြေငြာ ခဲ့သည်ယြမ္ ေငြ ၂၂၅ သန္း (ေဒၚလာ ၃၅ ဒသမ ၄ သန္း) ရရွိထားၿပီးSequoia China နှင့် Weilai Qichuang မှ ။ ယခင်က Hecom သည် Xiaomi တည်ထောင်သူ Lei Jun, Fosun RZ Capital, Peakview Capital, OFC, New Hope Group နှင့်အခြား လူသိများသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ရန်ပုံငွေ ရရှိခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2022,Hecom က နည်းပြ ပစ္စည်းများ တင်သွင်း ကြောင်း ကြေငြာ ခဲ့သည်၎င်း ၏ရှယ်ယာ များကို လူသိရှင်ကြား ထုတ် ပြန်ပြီး ပေကျင်း စတော့အိတ်ချိန်း တွင် စာရင်း ပြု သည်။ အဆိုပါ စာရွက်စာတမ်း ကို China Securities Regulatory Commission ၏ Beijing Bureau မှ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် ပြန်လည်သုံးသပ် ခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်တွင် လက်ခံခဲ့သည်။ အကြံပေး အေဂျင်စီ သည် China Capital Management Corporation ဖြစ်သည်။ အတည်ပြုပြီး သည်နှင့် Hecom သည် BSE တွင် စာရင်း ပြု သည့် ပထမဆုံး SaaS (၀ န်ဆောင်မှု အဖြစ် ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အခြေပြု ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာ လိမ့်မည်။
အများပြည်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ Hecom သည် ထွန်း သ စ်စ software operating service များ ကိုအာရုံစိုက် ပြီး အဓိကအားဖြင့် SaaS နှင့် cloud နည်းပညာ များအပေါ် အခြေခံ၍ မိုဘိုင်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ ကိုပေးသည်။
Hecom ၏အဓိက ထုတ်ကုန် Hongquan CRM, Hongquan Tong, Hongquan Marketing သည် Hecom မှ PaaS ပလက်ဖောင်း ပေါ်တွင် အဆင့်မြှင့်တင် ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အဆင့် အရောင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ဆောင် မှုစနစ် မျိုးဆက်သစ် ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်း၏ ပေးဆောင် ရသော ဖောက်သည် များသည် လျင်မြန်စွာ စားသုံး နိုင်သော ကုန် ပစ္စည်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တိရိစ္ဆာန် မွေးမြူ ရေး၊ ဆေးဝါး ၊ အ ၀ တ်အထည် နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ အလှဆင် ခြင်းစသည့် စက်မှုလုပ်ငန်း ၄၀ ကျော် တွင် အကျုံး ဝ င်သည်။ ဖောက်သည် များတွင် New Hope Liuhe ၊ Fosun Pharmaceutical, Sanyuan, COFCO, Beijing Yanjing Brewery နှင့်အခြား လူသိများသော ကုမ္ပဏီ များပါဝင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ဘဏ္ Financial ာရေး SaaS ဝန်ဆောင်မှု ပလက်ဖောင်း Beta ကို DataSecures B ကို + Round ငွေကြေး
Hecom သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန် ခြင်းမရှိသေးပါ။ ၎င်း၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ သည် ဆုံးရှုံး မှုများ ကျဉ်းမြောင်း ပြီး အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလားအလာ ကောင်း များ ကိုပြသသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင် Heicom ၏ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၆၆. ၉၁ သန်း ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄၁ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၄၂၀, ၀၀၀ အရှုံးပေါ် ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် အလားတူကာလ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ယွမ် ၁. ၂၃ သန်း အရှုံးပေါ် ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ တွင်အဓိက စီးပွားရေး ၀ င်ငွေ အားလုံး သည်စုစုပေါင်း အမြတ်အစွန်း ၇၇. ၆၆% ဖြင့် SaaS subscriptions မှရရှိသည်။
Supply Chain SaaS Provider LinkMore သည် ဒေါ်လာသန်း ၃၀ A + အလှည့်ကျ ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုကို ပြီးစီး ခဲ့သည်
အဝတ်အထည် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် SaaS (၀ န်ဆောင်မှု တစ်ခုအနေဖြင့် software) ပံ့ပိုး သူ LinkMore သည် ဒေါ်လာသန်း ၃၀ တန် သော မဟာဗျူဟာမြောက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုကို အင်္ဂါ နေ့တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။